အခုကျနော်ပြောမဲ့ လှေကားလေးဆိုတာ ဒီဓါတ်ပုံ ဘယ်ထောင့်က လမ်းလေးပါ။ အပေါ်တည့်တည့်မှာ ဗဟိုရုံး။ ဒီလမ်းလေးဟာ ရဲဘော်တိုင်း
တက်သွားတက်လာလုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဘေးကအလံတိုင်ထိပ်မှာ ခွပ်ဒေါင်းအလံတော်ဟာ တလူလူလွင့်နေတယ်။ တခါက ၀န်ကြီးချုပ် ဥပဓိရုပ်နဲ့ ရဲဘော်တစ်ဦး တက်လာတယ်။ သူဟာ ကဗျာဆရာ ယောဟန်အောင်။ အဖွဲ့အစည်းအတွက် ပေါ်လစီရေးရာတွေမှာ အတော်အားကိုးရတဲ့ရဲဘော်။ တခါက စာအရမ်း ရေးကောင်းတဲ့ ကိုဌေးအောင် တက်လာတယ်။ သူရေးတဲ့ စာဟာ ရိုးရိုးရသစာပေ မဟုတ်ဘူး။ တော်လှန်တဲ့ရသစာပေ။ ခင်ဗျားတို့ မယုံရင် အခု naytthit.com မှာ (ရွက်ဟောင်းကျွေချိန်) ဆိုတဲ့ ၀တ္ထုသွားဖတ်ကြည့်ပါ။ သူ့မှာ တော်လှန်ရေးကို ဘယ်လို ADVANCED ဖြစ်အောင် လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ဦးနှောက်ရှိတယ်။ ဗဟိုရုံးမှာ ကဗျာရေးကြတဲ့ ဇော်နောင်(ပအို့မြေ) နဲ့ခင်မောင်ဆွေ(မော်ကဲ) နေတယ်။ ဂစ်တာတီးကောင်းတဲ့ ကိုကျော်ကျော်လည်းနေတယ်။ ကြားဖူးတာ ငြိမ်းချမ်းရေးတိုက်ပွဲ ထဲက (သမိုင်းရဲ့လက်များ) ဆိုတဲ့ သီချင်းကို သူရေးတာတဲ့ (မဟုတ်ရင်ပြင်ပေးကြ)။ တခါက ရဲဘော် ဆလိုင်းကိုကိုဦး ဒေါသတွေနဲ့တယ်လာတယ်။ ဘာလို့ဆို ကျနော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကြားမှာက အမြဲပြဿနာတွေရှိနေတတ်တယ်။ တခါက (ငါလွပ်လပ်နေတယ်) ဆိုတဲ့ ကဗျာကိုရေးတဲ့ ရဲဘော် အောင်နိုင်ဦးတက်လာတယ်။ တခါက (ခေတ်သစ်ကောင်းကင်ပျံမည့်ငှက်များ) ကဗျာရှည်ကိုရေးတဲ့ ရဲမေ မိဆူးပွင့် တက်လာတယ်။ (မေမေရေ သားလှလှပပ ဖျားပေါ့) ၀တ္ထုကိုရေးတဲ့ ပွင့်သစ်(ကရိန်ကန်) တက်လာတယ်။ ဒီဓါတ်ပုံ ညာအောက်ထောင့်က နိုင်/စည်းဘားတိုက်မှာ ၀တ္ထုရေးတဲ့ ထိုက်သူနိုင်ရှိတယ်။ အစောပိုင်း ဒေါင်းအိုးဝေ တွေမှာ အရိုင်းဏီ ကလောင်နဲ့ရေးတဲ့ ရဲဘော်တို့တဲမှာ စာရေးတဲ့ ဆရာဂါမဏိ နဲ့ စစ်မင်း(ဧရာ)ရှိတယ်။
ဒီကွင်းပြင်ငယ်လေးဟာ ကျနော်တို့ နေ့တိုင်း တန်းစီ အလံတင် အလံချလုပ်နေကြ။ ညညတွေမှာ ဂစ်တာတီးတယ်။ လူကြီးတစ်ယောက် မြို့ကပြန်လာရင် အဲဒီကပဲ ပျောက်ကြားစောင့်ပစ်ရတယ်။ ပျောက်ကြားပစ်တယ်ဆိုတာ အခမဲ့ ကော်ဖီ လိုက်ကပ်သောက်တာကိုပြောတာ။ တစ်ညမှာ မီးပုံပွဲ လုပ်တယ်။ ကျနော်တို့ အားလုံးရယ် အခုမှ ရောက်လာတဲ့ဝန်ကြီးတွေရယ် လူမျိုးစုခေါင်းဆောင်တချို့ရယ် အလွတ်သဘောတွေ့ဆုံဆွေးနွေး မေး ဖြေ ကြတယ်။
ကျနော်တို့ထဲက ရဲဘော်တစ်ဦးက ထမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကို ဘယ်ခေါင်းဆောင်မှမဖြေသလို မဖြေလည်း မဖြေတတ်ကြပါဘူး။ နောက်ပိုင်းမှ သိတာ သူဟာ ကျနော် အခုထိတောင် ရွတ်ရွတ်နေလေ့ရှိတဲ့ ကဗျာတွေကိုရေးတဲ့ ကဗျာဆရာဖြစ်တယ်။ အခုတော့ သူက မြန်မာစာပေလောက မှာတော်တော်အရးပါတဲ့ စာရေးဆရာ ဖြစ်နေပြီ။ ဒါတွေကို ကျနော်ဘာလို့လိုက်ရေးနေလဲ? ကျနော်တို့ဟာ သမိုင်းရဲ့လှေကားထစ်တွေပဲ။ ဘယ်သူတွေတက်နင်းခရီးဆက်သွားခဲ့လဲ? ပြည်သူတွေကောဟုတ်ရဲ့လား? ကျနော် လုပ်ထားတဲ့လမ်းကို ဖတ်ကြည့်ကြပါဦး။ THANK YOU!!!
Posted by ဖိုးနေ at 11:39 PM